San Jose City College - Crown Education
Feb 05, 2020 globalnews2020, News
Free Registration: http://bit.ly/GLOBAL2020
“Heart of Tech”အဖြစ် တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ Californiaပြည်နယ် Silicon Valleyမှာ သင်ကြားလိုသူတွေအတွက် Global Education Fair 2020 ပွဲမှာလာရောက်မယ့် Community Colleges များ…
■ ယူအက်စ်မှာ(၂)+(၂)ပရိုဂရမ်အဖြစ် လူသိများတဲ့ ကောလိပ် (၂)နှစ်၊တက္ကသိုလ် (၂)နှစ် တက်ရောက်တဲ့ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေများပြားလာပါတယ်။
■ ကိုယ်အမှန်တကယ် သင်ကြားလိုတဲ့ ဘာသာရပ်(အထူးပြုမေဂျာ)ကို သိရှိနိုင်ခြင်း၊
■ တက္ကသိုလ်ပညာရေး (၄)နှစ်ရွေးချယ်သင်ကြားခြင်းထက် စာသင်စရိတ်သက်သာခြင်း၊
■ Reach Schoolsတွေဖြစ်တဲ့Harvard, MIT, Stanford Universityလို Rankingမြင့်တက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ UC Berkeley, UCLAစတဲ့ UC Systemတက္ကသိုလ်တွေ၊ New York University(NYU), Yale, Columbia, Brown, Caltech, Cal Polyတက္ကသိုလ်တွေသာမက State Universityတက္ကသိုလ်တွေကို Creditအလိုက်ပြောင်းရွှေ့သင်ကြားနိုင်ခြင်း စတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
■ San Jose City Collegeမှာ ဘယ်လိုဘာသာရပ်တွေသင်ကြားနိုင်လဲ?
နိုင်ငံတကာကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ San Jose City College (SJCC)မှာ ဘာသာရပ်ပေါင်း (၆၈)ခုရွေးချယ်သင်ကြားနိုင်ပြီး Accounting, Business, Education, Media Arts, Medical/Dental Assisting, Technologyစတဲ့ ဘာသာရပ်တွေက နိုင်ငံတကာကျောင်းသား၊ကျောင်းသူအများဆုံး ရွေးချယ်သင်ကြားသည့် ဘာသာရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
■ San Jose City College(SJCC)ရဲ့ တစ်နှစ်စာသင်စရိတ်နဲ့ တက်ရောက်ခွင့်ရဖို့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲ?
ကယ်လီဖိုးနီးယား ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာ တစ်နှစ်စာသင်စရိတ် USD 17,000 ကနေ 40,000 ဝန်းကျင်အထိကျသင့်ပေမယ့် SJCCမှာတက်ရောက်သူများအနေဖြင့် တစ်နှစ်စာ စာသင်စရိတ် USD 7,800 ဝန်းကျင်သာကျသင့်တဲ့အပြင် ထူးချွန်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေအတွက် မြန်မာငွေကျပ် သိန်း(၂ဝ)နှင့်ညီမျှသည့် Study Grantsတွေကို CROWN Educationကတစ်ဆင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
San Jose City Collegeဝင်ခွင့်အတွက် မြန်မာဆယ်တန်း/ iGCSE O’ levelရမှတ်အပြင် IELTS(5.5)ရမှတ်နဲ့ပါ ပူးတွဲလျှောက်ထားနိုင်ပြီး STEMဘာသာရပ်နဲ့ ဘွဲ့ရရှိသူတွေကိုApple, Google, eBay မှာ အဓိက ခေါ်ယူခန့်ထားကြပါတယ်။
■ Foothill-De Anza College, San Mateo Colleges, San Jose City College, Seattle Colleges အပြင် Cascadia Collegeတွေရဲ့ Fall (June), Winter(October) နဲ့ Spring (January) intakesအလိုက် ကျောင်းဝင်ခွင့်တွေကို Global Education Fair 2020ပွဲအတွင်း စုံစမ်းလျှောက်ထားနိုင်ရန်ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ပညာရေးပြပွဲနှင့် ဆွေးနွေးပွဲကို အခမဲ့တက်ရောက်ရန်၊
အောက်ပါလင့်ခ်မှတဆင့် Form ဖြည့်ကာ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၂)ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့အတွက် စာရင်းပေးသွင်းရန် ✆ 09-977-977-200 / 09-445-566-701
ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၃)ရက်နေ့ မန္တလေးမြို့အတွက် စာရင်းပေးသွင်းရန် ✆ 09-975-700-800 / 09-975-800-800
“သက်လုံကောင်းတဲ့ ပညာရေးလမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ဖို့…”
Aug 12, 2020 Zaw Hlaing Tun News
တကယ်တမ်းတော့ ပညာရေးဆိုတာ ဘဝရဲ့ တာဝေးအပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုပါပဲ... တစ်ချိန် ရည်မှန်းထားတဲ့ ပန်းတိုင်ကို အခက်အခဲမရှိ ဝင်နိုင်ဖို့အတွက် သက်လုံအားကောင်းကောင်း ရှိထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီအတွက် - ကိုယ်အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကို သိရှိအောင် ကြိုးစားပါ... ကိုယ်တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကို တချို့တွေက အသက်(၁၆)နှစ်ကစပြီး သိသွားကြတာရှိသလို...အသက်(၃ဝ)လောက်ရောက်မှ သိလာမြင်လာတာတွေရှိပါတယ်။ အသက်အရွယ်အလိုက် အသိအမြင်တွေကလည်း မတူနိုင်တာကြောင့် ဘယ်အရာက ကိုယ်တကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်...ဘာကိုလေ့လာရတာကို ခုံမင်တယ်ဆိုတာကို သိရှိနိုင်အောင် လူအများနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ…စာများများဖတ်ပါ...အားလပ်ချိန်တွေကို အလဟသ မကုန်ဆုံးပါစေနဲ့... လုံလောက်တဲ့ ...
“ယူကေမှာ ပညာသင်ကြားနိုင်ခွင့်က လူငယ်ဘဝရဲ့ စိတ်ကူးအိမ်မက်တစ်ခုလို့ ဆိုသူတွေအတွက် ၅၀% အထူးပညာသင်ဆုများ”
Aug 11, 2020 Zaw Hlaing Tun News, Scholarships
စာသင်စရိတ်၊ နေထိုင်ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားလေ့ရှိတဲ့ ယူကေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်မက်တွေကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ …ဘွဲ့ကြို (Top-Up Degree Program)၊ ဘွဲ့လွန် မာစတာ ပရိုဂရမ်တွေကို ကုန်ကျစရိတ် သက်သက်သာသာနဲ့ သင်ကြားခွင့်ရနိုင်ဖို့ … UWE Bristol မှာ ဘွဲ့လွန်ပရိုဂရမ် (၃၅)ခုနဲ့ ဘွဲ့ကြို ပရိုဂရမ်(၇)ခုအတွက် (၅၀%) ပညာသင်ဆုတွေလျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပညာသင်ဆုတွေကိုတော့ ၂ဝ၂၁ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက် ရွေးချယ်ပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ UWE Bristolတည်ရှိတဲ့ Bristolမြို့ဟာဆိုရင် သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းမြို့တစ်ခုဖြစ်သလို ...
Canadian High School Diploma (OSSD) Scholarship 100%, 50%, 20% (Sept’ 2020) intake အတွက် အထူးသီးသန့် Special Class အား Royal Academic – CROWN Education တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်
Aug 05, 2020 Zaw Hlaing Tun News, Scholarships
ပညာရေး ရည်မှန်းချက်ကြီးမား သောကျောင်းသား/သူများ အနေဖြင့် ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့် တက္ကသိုလ်ကြီးများ (University of Toronto, University of British Columbia, McGill University, University of Cambridge, Harvard University, NUS ကဲ့သို့သော တက္ကသိုလ်ကြီးများ) ကို ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်ဖို့ စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ပေးသွားမယ့် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကို စတင်လိုက်ပါပြီ။ Special Class မှာ ဘာတွေ လုပ်ပေးမလဲ - Scholarship application ...